Masar: Boqollaal Warshadood oo U Xirmay Musuqmaasuq. (Warbixin) – Shabakadda Amiirnuur
Masar: Boqollaal Warshadood oo U Xirmay Musuqmaasuq. (Warbixin)
December 29, 2019 5:56 am by admin Views: 153
Warshado badan oo dharka ku farsameyn jiray Masar islamarkaana soo saari jiray dhaqaale badan ayaa lagu soo waramayaa iney xirmeen.
“Dharka Shiinaha wuxuu xiray warshadeheena wuxuuna dumiyay guryaheena,” waa hadaladda ay haatan ku calaacalayaan qaar badan oo kamid ah ganacsatada Masaarida xilligan.
Mid kamid ah shaqaalaha warshadaha xirmay ayaa sheegay in ay soo wajahday duruud nololeed, dhibaataduna ay timid kadib markii dhar ka raqiisan kuwooda laga keenay Shiinaha iyo Turkiga.
“Anigu waan xirnay warshadeenna, anagoo sugaya tallaabo caddaalad ah oo dowladdu qaaddo” sidaasi waxaa ku cataabaya qaar kamid ah ganacsatada, xilli kuwa kale ay iska iibiyeen dhulalkoodii iyo xarumahoodii.
Khubarro baaritaan ku sameeyay dhibaatadan haatan taagan ayaa ku qiyaasey in dharka qiimo jabiska ah ee dalka la keeno ay ku kacayaan in kabadan 100 bilyan oo rodol sanadkii, taasoo keentay 2,600 warshadood inay albaabada isku xidhaan isla sababtan awgeed.
Maxamuud – oo ah shaqaale ka hawl gala magaalada Port Saciid – ayaa sheegaya in dhibaatada ugu badan ay tahay musuqmaasuq ay sameeyaan ganacsato waaweyn iyo shirkado, kuwaasoo sabab u noqonaya in dhaqaalaha wadanka uu gaabiyo.
Maxamad Al-Murshidi, oo ah xildhibaan ahna madaxa Ururka Warshadaha, wuxuu cadeeyay in hey’adaha ku shaqada leh arrimahan ay ka war hayaan dhibaatada sidoo kalana ay awoodi karayaan iney xakameeyaan.
Al-Murshidi wuxuu sheegay in uu lumay dhaqaale badan oo ku dhawaad 100 bilyan oo ginni, isaga oo carabka ku adkeeyay in dagaalka iyo baabi’inta tahriibka ay mas’uul ka tahay Wasaaradda Maaliyadda, Maalgashiga iyo Ganacsiga. Iyo warshadaha, xilli canshuurta ganacsatada laga qaadana ay dhibaato badan ka jirto.
Majdi Omran – oo ah milkiilaha mid ka mid ah warshadaha dharka ka sameysan ee deegaanka caanka ah ee Shubra El-Kheima ee waqooyiga Qaahira – ayaa qabta aragti ah in la badalo sharciga loo maro ganacsiga soo galootiga ah gaar ahaan muddada oggolaanshaah.
Rugta Warshadaha ee Masar waxay dhankeeda ku qiyaaseysaa in awoodda wax iibsiga iyo mugga isticmaalka suuqa maxalliga ah ee qaybta dharka ay yihiin 75%, marka la barbar dhigo ka hor xorriyadda sicirka sarrifka, iyada oo ay ugu wacan tahay warshadda oo ka cabsi qabta soosaarka iftiinka sii socda ee qiimaha joogtada ah ee canshuuraha, caymiska, gaaska, korantada, biyaha iyo fayadhowrka.
4 warshadood ayaa ku tiirsan suufka Masaarida oo keliya, halka warshadaha intooda kale ay keenaan ilaa 90% suuf ceyriin ah, iyo ku dhawaad hal milyan oo muwaadiniin ah oo ka shaqeeya dharka, iyadoo ay waaxda ku jiraan ilaa 5 kun oo warshadood oo ka diiwaan gashan qolalka.